Dawladda Qatar oo sheegtay in ay ka qayb gashay shirwaynaha Golaha Iskaashiga Khaliijka Gulf laguna qabtay kuwait – Radio Muqdisho
Dawladda Qatar oo sheegtay in ay ka qayb gashay shirwaynaha Golaha Iskaashiga Khaliijka Gulf laguna qabtay kuwait
Sheikh Hamid Al-Thani in usan ka qeyb galdooniin shir weyn oo ay yeelan doonaan Golaha Iskaashiga Khaliijka ee Kuwait (GCC) todobaadkan, sida uu sheegayo wasiirka arrimaha dibedda ee Qatar.
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ayaa Axaddii sheegay in hoggaamiyaha Qadar uu aqbalay markale martiqaadkii ahaa in uu ka qayb galo xaflada laba maalmood oo lagu qabtay Kuwait City, lix bilood ka dib markii kooxda Sacuudi hormuudka uu yahay ay soo rogeen xayiraad ka dhan ah Qadar. “Waxaan tagi doonaa golaha wasiirrada berri , amiirkuna waa ka qayb gali doonaa shirwaynaha,” ayuu wakaaladda wararka ee AFP u sheegay Sheekh Muxumed isagoo ku yiri shir ay ku yeesheen caasimadda Qatar ee Doha.
“Waa muhiim in nidaamka GCC ay sii noolaadaan.” Toddobaadkii hore, Kuwait waxay u dirtay marti-qaadyada dhamaan lixda xubnood ee xubnaha ka ah GCC, laakiin ma aysan caddayn in dhamaan hoggaamiyeyaasha kale ay iman doonaan.
GCC waa urur isbahaysi siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee wadamada Jasiiradda Carabta, oo ay ku jiraan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta (UAE).Tan iyo markii ay bilowday xannibaadda ay sameysay Sacuudi Carabiya, UAE iyo Bahrain – iyo sidoo kale Masar – Qatar 5-tii Juun, Kuwait Emir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah wuxuu u dhaqmay sidii dhexdhexaadiye ah oo lagu joojin lahaa khilaafka. Bishii Oktoobar, wuxuu uga digay khasaarihii ka iman lahaa GCC haddii ay dhibaatadu sii socoto. ”
Dhanka kale rajada iyo rajadeena, dhibaatada Khaliijka ayaa leh karti dheeraad ah, sidaa darteed dhamaanteena waa in aan si buuxda uga warqabnaa cawaaqibkiisa,” Sheekh Sabah ayaa sidaas yiri. “Wax walba oo soo kordhay waxay soo saari doontaa baaq toos ah oo wax looga qabto faragelinta gobolka iyo caalamiga ah, taas oo burburin doonta ammaanka Gacanka iyo dadkeeda.” Bishii Oktoobar, boqorkii Bahrain ayaa sheegay in waddanku uusan ka qayb qaadan doonin shirweyne ama shir ay ka qeybgalayaan Qatar, haddii Doha “uu hagaajiyo qaabkeeda”
Wadamada xagjirka ah ayaa ku eedeeyay Qatar in ay taageerto “argagixisada”, in ay sii wadaan xariirka Iran iyo in ay ka dhex shaqeeyaan arimaha gudaha ee wadankooda – eedeeymaha xukuumadda Qadar ayaa aad u beenisay. Qatar ayaa ku adkeysaneysa inaysan jirin sabab sharci ah oo loogu talagalay tallaabooyinka kooxeed ee Sacuudi-ga, isaga oo ku baaqay in ay ku dhaqaaqdo xad gudub madax banaanideeda.
amiirka Qatar iyo mas’uuliyiin ayaa sheegay in aysan aqbali karin is-dhiibid guud, waxay rabaan gorgortan, waxay doonayaan in ay iska kaashadaan iskaashi labada dhinac dhab ahaan, si loo xalliyo dhibaatada.
Digniin laga soo saray godadka laga qodo Dahabka